Dr. Tint Swe's Writings: Amniotic fluid ရေမြွာရည်
၁။ ဆရာရှင့် ကျမ ခုကိုယ်ဝန် ၃၆ပတ်ရှိပါပြီရှင့် ၇လမှာ PE ရပါတယ်အဲ့ကတည်းက Nephitapine 20mg BD labitalol tds သောက်နေရပါတယ် USG ရိုက်တယ် ၂ပတ်တခါ AFI ကနည်းနည်းလာတယ်ခု 9.2 ဘဲရှိတော့တယ်ဆရာ OG ကတပတ်ဘဲထပ်စောင့်မယ်ပြောပါတယ် ကလေးလည်းကောင်းကောင်းလှုပ်နေတယ် အဲ့ဒါ AFI ကဘယ်လောက်လောက်ဆို ဂိတ်ဆုံးနည်းလို့ရပါသလဲဆရာ ကျမ ၂ပတ်လောက်ထပ်စောင့်ချင်လို့ပါ
အသက် မပြောပါ။ အတိုကောက်တွေကို မှန်းယူရတာ မသင့်။ စမ်းသပ်ကုသပေးနေတဲ့ဆရာဝန်က လိုတာညွှန်မယ် ထင်ပါတယ်။
AFI အတိုကောက်ကို ကိုယ်စားပြုတာတွေ အများကြီးရှိတယ်။
AFI = Anthems for Insubordinates (band)
AFI = Ah, Forget It (polite form)
AFI = American Forest Institute
နောက်ထပ် ၅၇ ခုရှိသေးတယ်။
PE မှာလည်း Professional Engineer ကအစ ၁ဝဝ ကျော်ရှိတယ်။ သားဖွားပညာမှာ PET လို့သာသုံးကြတာများတယ်။
၂။ ဆရာရှင့် ရေမွှာ 9.5 ဆိုဗိုက်နာတဲ့ထိစောင့်လို့ရလားရှင့်။ ခုကိုယ်ဝန်က ၃၈ ပတ်ပါ။ (အသက် မပြောပါ။)
၃။ ရေမွန်းတာကို English လိုဘယ်လိုပြောရပါလဲဆရာ (အချပ်အလက် တခုမှ မပြောပါ။)
ရေမွန်းတယ်လို့တော့ မခေါ်ပါ။ ရေမြွာစောပေါက်တာရှိတယ်။ ကလေးမွမ်းတာရှိတယ်။ ရေမြွာရည်သွေးကြောပိတ်တာ ရှိတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တိုင်းမှာ ကလေးကမြွာရည်အိတ်ထဲမှာ ရှိတယ်။ ကလေး လွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်ရှားနေနိုင်တယ်။ အကာကွယ်ပေးထားတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုကောင်းစေတယ်။ အပူချိန်ထိန်းပေးတယ်။ ရေမြွာရည်ဆိုတာ ကြည်လင်နေပြီး နည်းနည်းလေးဝါတယ်။ ကိုယ်ဝန် ၃၄ ပတ်မှာ အများဆုံးရှိတယ်။ ပျမ်းမျှ ၈ဝဝ စီစီ ရှိတယ်။ မွေးကာနီး ၄ဝ ပတ်မှာ ၆ဝဝ စီစီရှိတယ်။ အမွှာဆို ပိုများမယ်။ polyhydramnios များတာလည်း မကောင်း။ oligohydramnios နည်းတာလည်း မကောင်း။ စာ ၂ ပုဒ်ရေးထားပါတယ်။
Fetal distress ကလေးမွမ်းခြင်း
Premature rupture of membranes (PROM) ဆိုတာ ကိုယ်ဝန် ၃၇ ပါတ်နောက်မှာ ရေ-အရည် ဆင်းတာကို ခေါ်တယ်။ ဗိုက်မနာသေးဘူး။ သွေးလဲမဆင်းသေးဘူး။ Preterm premature rupture of membranes (PPROM) ဆိုတာ ၃၇ ပတ် မတိုင်ခင်အဲလိုဖြစ်တာ။ Spontaneous premature rupture of the membranes (SPROM) ဆိုတာ ပုံမှန်၊ ရေမြွာလည်းပေါက်မယ်။ မွေးဘို့ဖြစ်တာတယ်။
ရေမြွာရည်ထုထည် 500mls ထက်နည်းတာ၊ သို့မဟုတ် <2cm maximum pool သို့မဟုတ် AFI <5ကို ရေမြွာရည်နည်းတယ်လို့ ခေါ်တယ်။ ကိုယ်ဝန် ၃% ကနေ ၅% ဟာ ရေမြွာရည်နည်းကြတယ်။ နည်းတာက ၂ မျိုးရှိသေးတယ်။
1. Amniotic fluid embolism ရေမြွာရည် သွေးကြောပိတ်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2017/09/amniotic-fluid-embolism.html
2. Amniotic fluid ရေမြွာရည် https://doctortintswe.blogspot.com/2016/12/amniotic-fluid.html
3. Early Rupture of Membranes ရေမြွာစောပေါက်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/early-rupture-of-membranes.html
4. Oligohydramnios ရေမြွှာရည်နည်းခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/pregnancy-oligohydramnios.html
5. Polyhydramnios ရေမြွာရည် များနေခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/polyhydramnios.html
6. Premature labor ကလေးစောမွေးခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/premature-labor.html